Shiinaha Rhinestone warshad pinel lapel iyo soo saarayaasha | Kingtai
Fiiri naqshaddan quruxda badan iyo qalloocayaga gaarka ah, oo astaan ​​u ah bisha miyir-qabka. Rhinestone-ka jeexjeexan cas waa mid qurux badan, qurux badan oo madadaalo leh! Ku habboon munaasabad kasta ama dhacdo dhiirrigelin ah. , Meesha dharka lagu xidho 'nikkel-plated' Waxay leedahay biin lagu xidho nabadgelyada oo loogu talagalay meelaynta qalab kasta, xadhig ama koofiyad.Qof walba waa boorso gaar loo leeyahay.
Xiddiga Star lapel Pin wuxuu soo saaray malaayiin musmaarro dhabel ah waxaana si wanaagsan u soo dhoweeyay macaamiil aan la tirin karin, taasoo ka dhigaysa biinankaaga dhagaxa qaaliga ah / Rhinestone inuu kaamil yahay sida dahabka oo kale!
Waxaan fududeyneynaa habka loo qaabeynayo biinanka jilibka si macaamiisha ay u habeyn karaan biinanka lapel. Tallaabada ugu horreysa waa inaad nala soo xiriirto si aan u bilowno sameynta biinankaaga dhabta ah ee 'Rhinestone'!
Maxaa loo yaqaan 'rhinestone pin' Sababtoo ah ma jiraan wax la mid ah rhinestones si aad uhesho biinankaaga gaarka ah ama gogosha loogu talagalay inay ku siiso muuqaal qurux badan oo riwaayad ah oo aad u baahan tahay.
Waxaan bixinaa in ka badan dersin midabbo kala duwan oo dhagax ah oo cabbirro kala duwan leh, iyo sidoo kale qalabyo badan iyo xulashooyin si fiican kaaga caawiya sidii aad u qaabeyn lahayd cirbadahaaga Rhinestone si ay ula kulmaan baahiyahaaga saxda ah.
PinMart wuxuu nasiib u yeeshay inuu la shaqeeyo qaar ka mid ah noocyada ugu waaweyn ee moodada, naadiyada taageerayaasha iyo macaamiisha shirkadaha si ay uga dhigaan qaar ka mid ah biinanka ugu cajiibka badan Rhinestone iyo brooches.
Kuwani waa alaabooyin tayo sare leh oo la awoodi karo, oo aan laga heli karin meelo kale.
Biinanka rhinestone ee sida gaarka ah loo sameeyo miyey ku habboon yihiin naqshadayda?
Waxaan u habeyn karnaa biinanka rhinestone lapel ee qaabab kala duwan, laakiin dabeecadda maaddada waxay ka dhigan tahay in naqshad casri ah aysan noqon karin xulashada ugu fiican ee biinankaas oo kale.
Waxaa jira midabbo kala duwan iyo cabbirro kala duwan oo kala duwan oo laga kala dooran karo, si kastaba ha noqotee, waxaan abuuri karnaa biinanka cajiibka ah iyo xarkaha leh muuqaal la yaab leh oo aadan filan karin.
Nidaamka sameynta biinanka rhinestone ee caadiga ah macnaheedu waa celceliska waqtiga wax soo saarka ka dib oggolaanshaha muunadda waa 5-8 toddobaad. dalab, mid ka mid ah wakiiladayada adeegga macaamiisha ayaa kula soo xiriiri doona maalmaha shaqada gudahooda. Kala hadal fikradahaaga khabiirkeena PIN-ka ah ee khaaska ah!
Hore: sawir guntin pinis
Xiga: 3D Lapel pin